Dowladda Soomaaliya oo rag ka tirsan Al-shabaab xukunno ku Fulisay – Radio Daljir
Abriil 15, 2015 8:47 b 0
Arbaco, Abriil 15, 2015 (Daljir) —Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Somalia ee Somalia ayaa xukunno ku ridday toddoba ruux oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Toddobadan ruux oo rag ahaa ayay makxamaddu sheegtay inay dambiyada xeer ilaalinta maxkamaddu kusoo eedeysay waxaana xukunnada yihiin xabsi waqtiyo kala duwan ah.
Kaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida, Col. Xasan Cabdiraxmaan Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamaddu ay ku ridday eedeysanayaasha la horkeenay, iyadoo lagu xukumay xabsiyo u dhexeya shan illaa toban sannadood.
Eedeysanayaashu ay maxkamaddu ay xukunnada ku ridday ayaa waxay kala ahaayeen; C/raxmaan Axmed Afrax, C/raxmaan Mukhtaar Caamir, C/naasir Aadan Caynte, C/llaahi Xersi Maxamed, Maxamed Xasan Cali, Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Max\_’ed deeq C/qaadir Fiidow.
Col. Xasan C/raxmaan oo ku dhawaaqay xukunnada ay maxkamaddu ridday ayaa sheegay in C/raxmaan Axmed Faarax oo 22-jir ah inuu ka tirsan yahay Al-shabaab hubkana u hayn jiray xoogagga kooxdan ay ku xukuntay 10-sano oo xabsi ah.
Sidoo kale, C/raxmaan Mukhtaar Caamir ayaa isna lagu xukumay 10-san oo xabsi ah, waxaa kaloo C/naasir Aadan Caynte, C/llaahi Xirsi Maxamed, Maxamed Xasan Cali iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo iyagana ku eedeysanaa inay Al-shabaab ka tirsan yihiin ayaa lagu xukumay min shan sano oo xabsi ciidan ah.
Ugu dambeyn, Col. Xasan Shuute ayaa sheegay in Maxamed Deeq C/qaadir Fiidow oo isna eedeysanayaasha ka mid ahaa oo la sheegay in Al-shabaab uu ka tirsanaa ay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida lagu xukumay lix sano oo xabsi ciidan ah.
Col. Xasan C/raxamaan ayaa sheegay in xukunnada ay maxkamaddu ridday ciddii aan ku qanacsanayn ay muddo 30-casho gudahood ah ka qaadan karto rafaan, haddii muddadaas la gudbana uu xukunkan dhaqan-gal noqonayo.